Kunyangwe Ndeupi Musika weVashambadzi, Kushambadzira ibasa Rakaoma | Martech Zone
Kunyangwe Ndeupi Musika weVashambadziro, Kushambadzira ibasa Rakaoma
Muvhuro, Mbudzi 28, 2016 Muvhuro, Mbudzi 28, 2016 Douglas Karr
Rimwe sangano mumutsipa wedu wehuni rakaenda pasi pemwedzi uno. Yaive nehunhu hwese hwesangano rakakura - hutungamiriri hune tarenda, timu yepasirose-yevashandi vakazvipira, nzvimbo yakanaka mudhorobha, uye nemukurumbira wekumaka online nerekutanga bhuku. Vakanga varatidzira zvemukati maitiro aizo tarisa uye kuwana traffic uye kutyaira iwo traffic kune avo vatengi. Asi zvakaramba zvichienda pasi.
Sangano redu, DK New Media, anga ari pane izvi kwemakore manomwe. Ndinoseka (kunyangwe zvisiri izvo kuti zvinosekesa), kuti ino ndiyo yangu makore manomwe ekutanga. Ndakarega iyo agency ichifara ichidya hupenyu hwangu. Isu takave nekukwira kumusoro uye pasi panguva iyoyo. Iyo yepamusoro soro yaive jetsetting pasi rese ichiongorora makambani ekushambadzira tekinoroji kune vanoita mari. Vakaderera zvakanyanya vaidzinga vashandi, vasingatore muhoro, uye vachiri kukwereta mutero.
Tichiri kutenderera nhasi asi handikwanise kudoma kuti nei rimwe agency rine tarenda rakawandisa ringave raenda uye isu tichiri kusimba. Zvichida zvakawanda zvacho ndezvekuti kukundikana hakusi kuita. Chimwe ndechekuti hatina kumbobvira tagutsikana mukuvandudza maitiro uye nekutengesa kune vanhu vazhinji. Tiri chitoro chinononoka icho chinotevera a framework (pazasi), asi nguva dzose inovaka mhinduro dzetsika zvichibva pamikaha uye nemikana ine vatengi vedu.
Zvinotyisa ndezvokuti zvese zvaunoverenga pamhepo zviri nyore sei. Iwo mazita, infographics, ebook, mapuratifomu ... munhu wese anoda kukuudza iwe kuti zviri nyore sei kushambadza nekutengesa zvigadzirwa zvako online. Hazvisi nyore uye hazvina kumbove zvakadaro. Uye kumhanya uko tekinoroji irikubatsira zvisarudzo zvedu kuri kuita zvishoma kutevedzera nongedzo yematanho, masvikiro, uye zvinodiwa nevatengi.
Vatengesi vanogona chete kushambadza ivo pachavo pazvinhu zviviri - mhedzisiro kana mutengo. Mhedzisiro inoda nguva nezviwanikwa, asi vatengi kazhinji vanouya kwatiri vasina. Vanoda bullet yemashiripiti. Masangano mazhinji kwazvo anofara kusaina iwo uye nekumisidzira tarisiro yekuti iwo mashiripiti bara, chete kudzingwa nemutengi pasi pemugwagwa wezvaakarasikirwa netarisiro. Ndiri kuona mamwe masangano ane zvikwata zvisingatendeseki zvevatengesi vanoziva izvi, havana basa nazvo, uye vongoenda kunotengesa mumwe mutengi mushure meumwe.
Asi Iri Sangano Rakasiyana
Makore mashoma apfuura, ini ndaive newandaishanda naye aive bhizimusi shamwari wandishevedza uye andiudze nezvesangano rinoshamisa iye achangobhadhara kuti abatsire mukutengesa kwake kwakawanda. Ivo vaive vakadhura zvakanyanya kupfuura agency yangu, asi ivo vakashanda muindasitiri yake kwegumi uye vaive nechirongwa chakasarudzika chaizounza mhedzisiro inoshamisa. Ndakakwenya musoro wangu ndikamuudza kuti ndanyadziswa kuti haana kukumbira rubatsiro rwedu. Akanditarisa ndokuti, “Iwe haunzwisise, ino agency yakasiyana. "
Aitaura chokwadi, akavadzinga basa chikwangwani changopera. Kwete izvozvo chete, iro agency raive nezvakawanda zviwanikwa saka akabva abuda muhukama asina kana chinhu.
Zvinoshungurudza nekuti iwo musuwo unotenderera unowanzo siya mutengi akashungurudzika pamusuwo pedu - nebhajeti yatambiswa, uye pasina nguva yekudzokorodza. Pasina mubvunzo kuti avo vatengi vanorova pasuwo reiyi agency zvakare. Imwe yenyaya dzakaburitswa nepamusoro pevagadziri kumusoro kwaive kushomeka kwekuvimbika kwevatengi. Isu takaona yakafanana nyaya - iwe unoshanda nesimba kufambisa mutengi kumberi uye vanokusiira iwe kune sirivheri bullet (iyo isingamborove chinangwa chayo) kana seinodhura sevhisi.
Kana ichinyatso kubaya, tinoramba takatarisa mutengi mushure mekunge vaenda. Semuenzaniso, uyu aive mutengi isu isu takawedzera organic traffic uye kunyorera izvo zvakakonzera kumamirioni emadhora emari. Zvinoita sekunge vadzokera zvakare patakatanga kuvabatsira… saka kwete chete mari yaenda, ndizvo zvakaita mari yavakaita kusangano redu.
Saka Chii Chinongedzo Changu?
Ini handisi kuzonyepedzera kuti ndinoziva kuti nei mamwe emasangano anoshamisa achitadza, asi ini ndinonzwa zvakanyanya zvacho zvine chekuita nehubris. Zviri kufunga kuti iwe wakasiyana iwe paunenge usiri. Zviri kufunga kuti une zvemashiripiti bara iwe zvausiri. Zviri kufunga kuti iwe unogona kubatsira munhu wese kana iwe usingakwanise. Uku hakusi kushoropodza kwevatungamiriri nevashandi vakadurura mweya yavo kubasa ravo rezuva nezuva, kungoona chete.
Isu tinoedza kuita basa riri nani kwazvo mukumisikidza zvinotarisirwa kune vedu vatengi kuti ivo vari kutenga kwedu ruzivo uye kwedu kuedza. Nekuti izvo zvinhu zviviri zvakasarudzika pakati pevezera redu, tine tarisiro yekuti tinogona kufambisa tsono kumakambani mazhinji. Asi zvese zvinoda kushanda nesimba kwazvo. Tinofanira kutsamira pazviitiko zvedu kuti tibvise vatengi vedu kure nezvikanganiso uye nenzira dzakaratidza. Uye isu tinofanirwa kuisa zvese zviwanikwa zvedu - kuyambuka migero, kuyambuka masvikiro, uye kugadzirisa nekukurumidza kuchinjika zvinodiwa.
Kana usiri kutenga basa rakaoma, haufanire kutarisira mhedzisiro yepamusoro.
Tags: bokaDK New Mediakushambadzira kukura kwemhandokukosha
Maitiro Ekumisikidza Google Analytics Tsika Mapoka neGoogle Tag Manager
Ruzivo Rwerudzi: Kusvika Mireniyumu ine Dhata-Inotungamirwa Maitiro